Yeman iyo Soomaaliya oo ka shiray arrimaha Burcad-badeeda, Argagixisada iyo Tahriibta (Dhegeyso) – Radio Daljir
Seteembar 19, 2013 4:08 b 0
Sanca, September 19, 2013 – Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa maalmahan ku sugnaa dalka Yeman, halkaas oo uu kulamo kala duwan kula qaatay madaxda wadankaas.
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa intii uu joogay dalka Yeman waxaa uu kulamo kala duwan la yeeshay madaxda dalkaas, Madaxweynaha Cabdirabi Mansuur iyo ra?isal wasaaraha wadanka Yeman ayaa qeyb ka ahaa madaxda ay shireen wasiirka arrimaha gudaha.
Dowladdaha Soomaaliya iyo Yeman waxay ka wada arrinsadeen wada-shaqaynta Burcad Badeedda, Argagixisadda, Arimaha Qaxootiga, Arimaha Cidanka iyo Tahriibka sharci darrada ah,? wasiir guuleed oo arintaas ka hadlay waxaa uu sheegay in wada-hadalku is afgarad ku dhamaaday.
Dhegeyso:- Wasiirka arrimaha gudaha amniga Cabdikariin Guuleed oo ka hadlaya safarkiisa Yeman.